China Lycra Texture Weft knitted 8% Spandex 92% Polyamide Shiny RPET Jacquard Wrinkled Seersucker Stretch Swimsuit Fabric mpanamboatra sy mpamatsy | Wenchang
Lycra Texture Weft Knitted 8% Spandex 92% Polyamide Mamiratra RPET Jacquard Wrinkled Seersucker Stretch Swimsuit Fabric
Item No: KW-1903
Fitaovana ： 8% Spandex 92% Polyamide
Toetra mampiavaka azy: Sariaka amin'ny hoditra / Anti-Wrinkle / Elasticity /
Nampiasaina ho an'ny: Swimsuit
KATEGORIAM-pamokarana Swimsuit FABRIC
ITEMY NO KW-2182
ara-nofo 92% Nylon 8% Spandex
Seersucker dia pirinty vita amin'ny landihazo misy foam sy crepe. Misy karazany maro ny volon-doko fanamainana, loko tsotra, pirinty ary kofehy vita amin'ny kofehy. Miaina fofonaina izy io ary mahazo aina. Tsy mila vy io aorian'ny fanasana. Izy io dia mety amin'ny akanjon'ny ankizy, blouse, zipo, akanjo mandry, sns. Ny foaming dia fampiasana fibre izay manitatra sy mihena rehefa tratry ny alkali mifantoka. Seersucker azo amin'ny fanontana mivantana alkali amin'ny lamba landihazo dia antsoina hoe seersucker alkali, fantatra ihany koa amin'ny hoe seersucker nentim-paharazana; Ny seersucker dia vita pirinty amin'ny ampahany amin'ny resina anti-dyeing amin'ny lamba landihazo, ary ny seersucker novokarin'ny lye dia mandeha sambo. Ny teny ampiasaina amin'ny indostrian'ny fanontana sy ny fandokoana dia seersucker resin.
Rantsana roa hafa karazana: Warp any an-tany ary fikorohana mibontsina no ampiasaina amin'ny fanenomana. Ny kofehy manjelanjelatra dia misy isan'ny kofehy matevina ary ny hafainganam-pandeha aelin'ny hena dia 30% haingana kokoa noho ny an'ny karana ambanin'ny tany. Noho izany, ny vatan'ny lamba dia manjary miboiboika matevina sy matevina rehefa manenjana lamba volondavenona. Rehefa vita ny famaranana dia lasa mpitaingin-tsiambaratelo voatenona. Ny seersucker novokarin'ity fomba ity dia mazàna vita amin'ny vokatra vita amin'ny loko vita amin'ny kofehy, ao anatin'izany ny landihazo rehetra, fibre voadio na fifangaroan'ny fibre simika.
Ohatra, ny kofehy vita amin'ny kofehy na kofehy vita amin'ny polyester sy ny landihazo dia tenona sy tsaboina amin'ny vahaolana sodium hidroksida. Rehefa mihena mihoatra ny fibre polyester ny fibre landihazo, dia hamorona vovoka mibontsina ny vatan'ny lamba; ohatra iray hafa dia ny fampiasana polyester shrinkage avo lenta sy polyester tsotra amin'ny vala. Ny lamba dia tenona kofehy spacer voalamina amin'ny lalana weft na amin'ny lalana weft. Aorian'ny fitsaboana hafanana, ny vatan'ny lamba dia mamorona vovoka concave-convex noho ny haben'ny hafanana mihena amin'ny kofehy roa.
Ny akora vita amin'ny seersucker dia vita amin'ny landihazo madio na kofehy polyester / landihazo, ary ny hakitroky ny hodi-bozaka dia avo noho ny an'ny tany, na ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy ary ny kofehy amin'ny tany dia vita amin'ny kofehy tokana. Rehefa manenona, ny haavon'ny lohan'afon'afo dia lehibe kokoa noho ny valin'ny tany, ary avy eo nolokoina sy namboarina malemy ny sela ary namolavola malalaka mba hahatonga bubble mahafinaritra sy tsy mitovy. Ampiasao ny fitsipika izay mihaona amin'ny lokon'ny landihazo mifangaro mba hampitombo ny savaivony ary hanafohezana ny halavany.
Seersucker dia lamba landihazo misy endrika manokana sy toetra mampiavaka azy, izay vita amin'ny muslin manify. Ny velarana lamba dia mampiseho bubble kely misy tsy fitoviana mitovy sy matevina, izay tsy manakaiky ny vatana rehefa mitafy azy, ary manana fahatsapana milay. Izy io dia mety amin'ny karazana akanjo fahavaratra vehivavy rehetra. Ny tombony ho an'ny akanjo vita amin'ny seersucker dia ny tsy fanosorana vy aorian'ny fanasana azy fa ny fatiantoka dia ny fisidinan'ny miboiboika aorian'ny fikosehana miverimberina. Indrindra rehefa manasa dia tsy tsara ny mampiasa rano mafana handemana, na hikosehana sy hodiovina mafy mba tsy hisy fiantraikany amin'ny hafangongoan'ny bubble.
Teo aloha: Volom-bolo vita amin'ny polyester malefaka RPET Pet Mesh Milky Jersey Fabric vita amin'ny tavoahangy plastika namboarina ho an'ny T-shirt fanatanjahan-tena
Manaraka: RPET hatsembohana 87% polyamide 13% spandex Lycra Cotton Feeling Jacquard Custom 4 Way Stretch Printed Recycled Legging Fabric
Akanjo akanjo ba Jacquard, lamba fitafiana mpihaza Seersucker, lamba polyamide